Hordhac-Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd.
Zhejiang Rancho Santa Fe textile Co., Ltd shirkaddu waxay ku taal Shaoxing Paojiang aaga warshadaha, waa ururinta cilmi baarista iyo horumarka, wax soo saarka, daah iibka iyo gogosha oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dharka.
Rancho Santa Fe, oo leh raasamaal diiwaangashan oo ah 50 milyan yuan tan iyo 2006, waa shirkad sumcad leh. Waxaa lagu qiimeeyay inay tahay iibiyaha AAA laga soo bilaabo 2006 ilaa iyo hada.Waxaan ka helnay shahaadada BSCI laga bilaabo 2014 iyo OECO-TEX100 laga bilaabo 2018. Rancho waxay leedahay koox iib ah oo xoog leh, waxay dhoofisaa dhamaan noocyada dharka guryaha, oo ay ku jiraan daahyada iyo gogosha iyo noocyada dharka. waxay sameysay shabakad suuqgeyn oo xoog leh, marka lagu daro suuqa gudaha, badeecadaha sidoo kale waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Ameerika, Bariga Dhexe, Koonfurta Ameerika, Ustaraaliya, iwm. In kabadan 80 dal iyo gobol.
Rancho wuxuu had iyo jeer u qaataa "qanacsanaanta macaamilka" sida falsafadeeda ganacsiga, "inuu la kulmo oo uu si joogto ah uga badiyo baahiyaha macaamiisha" sida raadinta tayada adeegga, si ay u siiso macaamiisha xalal adeeg oo buuxa oo kala duwan. Dhammaan dadaalladan waxay gacan ka geysteen koritaanka degdegga ah ee shirkadda iyo macaamiisha, sidoo kale waxay si weyn kor ugu qaadeen horumarka guud. Tani waa himilada iyo masuuliyadda Rancho, waana ballanqaad joogto ah oo ay shirkaddu u hayso macaamiisha.